Ixabiso eliphantsi 6016 aluminium alloy unyango ubushushu CNC machining iindawo zomzi mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
6016 aluminium unyango ubushushu ingxubevange
Umgaqo we-aluminium unyango lobushushu
Eyona njongo iphambili kukuphucula iipropathi zoomatshini zokwenza ingxubevange kunye nokunyusa ukuxhathisa. Ukusebenza komhlwa, ukuphucula ukusebenza kwenkqubo, kunye nokufumana uzinzo olubonakalayo.
Chwetheza udidi lokulungiswa kwealuminium efanelekileyo ukulungiselela unyango lobushushu:
I-aluminium alloys inokuhlengahlengiswa ukomelela, ukumiliselwa, kunye nezinye iipropathi ngokusebenza ngokubandayo, ukucima, ukuguga, kunye neendlela zokubamba. Ngokwenkqubo yokusebenza ukufumana iipropathi ezifunekayo, lo msebenzi ubizwa ngokuba ngunyango lobushushu, kunye nokuhlelwa kobushushu kubizwa ngokuba luhlobo lobushushu. Ukuthetha ngokubanzi, izinto ezinokukhubazeka ze-aluminium zahlulwe zangamacandelo amabini: uhlobo lonyango olungashushu kunye nonyango lobushushu: i-aluminium emsulwa (uthotho lwe-1000), i-Al-Mn series alloy (3000 uthotho), i-Al-Si series alloy (4000 uthotho) kunye I-Al-Mg Series alloys (i-5000 series) zii-alloys ezingezizo ezeshushu; I-Al-Cu-Mg series alloys (2000 series), i-Al-Mg-Si series alloys (6000 series) kunye ne-Al-Z n-Mg series alloys (i-7000 series) i-alloy ephathwa ngobushushu.
I-Ouzhan eyenziwe ngokwezifiso i-aluminium alloy machining machining product product
Yintoni ifuthe lonyango lobushushu lwealuminium alloy?
I-6063 aluminium alloy ine-thermoplasticity elungileyo, ukumelana nokubola kunye neepropathi ezifanelekileyo zoomatshini, kwaye kulula ukuyifakela i-electroplated, ke isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yeeprofayili zorhwebo, iiprofayili zokwakha kunye nezinto ze-radiator zombane. Kuxhomekeka kwimeko yokusetyenziswa kwezinto eziphathekayo, kukho umahluko omkhulu kwiimfuno zokusebenza kwemveliso. Umzekelo, iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezisetyenziswa kwiinkqubo zokupholisa isikhululo sesiseko se-elektroniki zineemfuno eziphezulu zokumelana nokubola komphezulu wezinto, kunye neeprofayili zokwakha ezisetyenziswe kulwakhiwo lodonga oluphezulu oluphezulu ziiplastiki kunye neemfuno zamandla ezinto eziqinileyo, yenza kubaluleke ngakumbi ukuphuhlisa izinto eziphezulu zealuminium. Kwinkqubo yophando kunye nophuhliso lwealloys aluminium, iinkqubo zokunyanga ubushushu zisetyenziswa kwiindawo ezininzi ukufumana ubume obungcono kunye neepropathi.
Egqithileyo Aluminium iprofayile extrusion iinxalenye
Okulandelayo: Aluminium ingxubevange radiator extruded iindawo